အပ်အပ်များ နှင့်ပတ်သက်ပြီးသိထားရမယ့်အရာများ Taiwan မှ အပ်အပ်များ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊
Soar Technology Co., Ltd တစ်ဦးဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းနှင့်ပြည်ပသို့ပို့ကုန်ဖြစ် အပ်အပ်များ, စုံစမ်းကဒ်အပ်, Cantilever အပ် အတွက်စက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူ Taiwan. ကျနော်တို့ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ပို့ကုန်တသမတ်တည်းမြင့်မားလူတန်းစားထုတ်ကုန်များနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်တရားမျှတစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်ကိုမှစုစုပေါင်းဝန်ထမ်းပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်တင်းကြပ်ထိန်းသိမ်းလိုက်နာမှုအားဖြင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်သို့တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ ကျနော်တို့ကိုလယ်၌အများအပြားမူပိုင်ခွင့်ရပြီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည်ဖြူနဲ့ Hard အလုပ်နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနဲ့အညီကျနော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးနှင့်ကိုက်ညီဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစတိုင်များအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
အကောင်းဆုံး အပ်အပ်များ ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက် အပ်အပ်များ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ဖြူးသူ၊ Taiwan
မကြာသေးမီကလျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကြောင့် semiconductor processing နှင့် design technology ကြောင့်ဖြစ်သည်,semiconductor wafers ၏လည်ပတ်မှုကြိမ်နှုန်းနှင့်ပေါင်းစည်းမှုသိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့သည်.ယေဘုယျအားဖြင့်မဟုတ်သောအတွက်အသုံးပြုသည့်ကိရိယာတစ်ခု၏ Pad ပုံသဏ္shapeာန်-မှတ်ဉာဏ်လယ်တွင်မမှန်သော 2D အစီအစဉ်ရှိသည်.ဤဒြပ်စင်အားတုန့်ပြန်နိုင်သောစုံစမ်းနိုင်သောပုံစံတစ်ခုမှာဒေါင်လိုက်စုံစမ်းသည့်ကဒ်ဖြစ်သည်အဆိုပါမြွေဆိုးအပ်ကိုဒေါင်လိုက်စုံစမ်းသည့်ကဒ်တွင်အသုံးပြုသောအမြင့်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းကိုအသုံးပြုသည်-သိပ်သည်းဆဒေါင်လိုက်သွင်းနည်းလမ်း. ပစ္စည်း:P7,ဘီစီ သတ်မှတ်ချက်များကိုဖောက်သည်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည် စိတ်ကြိုက်ထုတ်လုပ်မှုဖောက်သည်ပုံဆွဲခြင်းနှင့်နမူနာအရသိရသည်လုပ်နိုင်ပါတယ် တည်ငြိမ်သောအရည်အသွေးနှင့်အစာရှောင်ခြင်းပေးပို့ မူရင်းထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ:တောင်ကိုရီးယား,အမေရိကန်
အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များ၏ထုပ်ပိုးအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်.ဤဗဓေလသစ်သည်ကောင်းမွန်သောဖြစ်စဉ်နှင့်တည်ငြိမ်မှုရှိသည်.မာကျောပြီးသောအခါဤထုတ်ကုန်သည်ကောင်းမွန်သောကော်ဖြစ်သည်,နှင့် oleochemicals နှင့်အရည်မှကောင်းသောခုခံရှိပါတယ်.၎င်းသည်အနိမ့်အိုင်းပါဝင်မှုနှင့်ကောင်းမွန်သောသိုလှောင်မှုတည်ငြိမ်မှုရှိသည်,မြင့်မားသောအပူချိန်မှာလျင်မြန်စွာခိုင်မာစေနိုင်သည်.၎င်းသည်ထူးခြားသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများရှိပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင်ရေကာတာတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ဖြည့်တင်းခြင်းအတွက်ဗဓေလသစ်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်.ဤဗဓေလသစ်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောကြာရှည်ခံမှုရှိပြီးအမျိုးမျိုးသောပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်.ဒီထုတ်ကုန်၏မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်ကြာရှည်ခံမှုရှိပါတယ်,နှင့်မြင့်မားသည်-အများအပြား application များအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်ကော်. ဒါဟာမြင့်မားသောထဲမှာပါတဲ့နှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ thixotropy ရှိပါတယ်.အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်တင်းမာ၏လုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်း,လွတ်လပ်စွာမချည်နှောင်နိုင်ပါ. မာကြောသောမျက်နှာပြင်သည်ချောကျိကျိနှင့်အရောင်တောက်ပမှုမရှိပါ. ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောရှုထောင့်အကွာအဝေးတွင်ကောင်းမွန်သောရှုထောင်တည်ငြိမ်မှုရှိသည်. မာကြောသောပစ္စည်းများသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအကာအကွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုထိတ်လန့်ခြင်းတို့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်. ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးစမ်းသပ်မှုအပြီးတွင်ဤထုတ်ကုန်မှထိန်းသိမ်းထားသောအစွမ်းသတ္တိသည်ကောင်းမွန်ဆဲဖြစ်သည်. ဒီဗဓေလသစ်၏မာကြောထားသောပစ္စည်းသည်ဓာတ်ငွေ့ရောအရည်အတွက်ပါကောင်းမွန်သောခံနိုင်ရည်ရှိသည်. ဤထုတ်ကုန်သည် 2002 နှင့်ကိုက်ညီသည်/95EC RoHS စည်းမျဉ်းများ.
အပ်အပ်များ ထို့အပြင်အာကာသယာဉ်အကြံဥာဏ်များ (သို့) အပ်ချည်မျှင်များဟုလည်းလူသိများသောပစ္စည်းများ၊ အရှည်များ၊ ပုံစံများနှင့်အစွန်အဖျားအချင်း ၀ န်းကျင်တွင်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပ်စမ်းစစ်ကိရိယာများသည် Rhenium tungsten၊ Beryllium Copper, Palladium Alloy သို့မဟုတ် Tungsten စသည့်ကုန်ကြမ်းများနှင့် စုံစမ်းကဒ်အပ် ၊ Cantilever အပ် , စုံစမ်းစစ်ဆေးပင် , Cantilever စုံစမ်းစစ်ဆေး , Semiconductor Probes များ နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေး Cobra တို့ကအများစုအတွက်သင့်လျော်ပါသည်။ applications များ probing ၏။ wafer probe card တွင်ပုံနှိပ်ထားသော circuit board တစ်ခုပါ ၀ င်ပြီးတိကျစွာတပ်ဆင်ထားသောအပ်ချည်ထိုးအပ်များပါ ၀ င်သည်။ အဆိုပါစုံစမ်းစစ်ဆေးဆေးထိုးအပ်စမ်းသပ်မှုစဉ်အတွင်း IC ချစ်ပ်ပေါ်တွင် bond pads, ဒါမှမဟုတ် signal ကိုဆိပ်ကမ်းကိုဆက်သွယ်သောချွန်ထက်အကြံပေးချက်များနှင့်အတူအလွန်သေးငယ်သောတံသင်ဖြစ်ကြသည်။
Epoxy ကော် သည်မြင့်မားသောနှောင်ကြိုးခိုင်မာမှု၊ အပူချိန်တည်ငြိမ်မှု၊ အစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူမှုနည်းခြင်းနှင့်ချုံ့ခြင်းတို့ကိုပေးသည်။ Epoxy Hardening သည်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်တည်ငြိမ်မှုကိုရရှိနိုင်သည်။ မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်ထိတွေ့သောအခါအပူ cure epoxy ၏ကုထုံးယန္တရားကိုသက်ဝင်စေပြီးကော်ကိုကုသပေးသည်။ အပူကိုဆက်လက်ထိတွေ့ခြင်းသည်ပိုလီမာများကိုသူတို့နှင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းကြောင့်ခိုင်မာသောခိုင်မာသည့်အစိုင်အခဲပစ္စည်းများကိုအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ပေးသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ထုတ်ကုန်များလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။